Google AdWords ee Hay'adaha | Dhammaan Qalabka Aad U Baahan Tahay!
Google AdWords ee Hay'adaha: Dhamaan ololayaasha macaamiishaada oo gacanta lagu hayo
Google Ads ee Google ee Hay'adaha waxaad ku badbaadin doontaa waqti sidaa darteed waxaad diiradda saari kartaa waxa ugu muhiimsan: macaamiishaada.
The sifooyinka wanaagsan ee apps kooxda diiradda
Hel ah farriimaha iyo warar sheegaya in waqtiga dhabta ah qaab ololaha macaamiisha aad '.
Ka hel ogeysiis ku saabsan waxa ugu muhiimsan Google AdWords for Agencies
Samee oo shaqsi ahaan notifications si aad u ogaatid marka beddelaadyadu hoos u dhacaan ama marka aad u baahan tahay inaad kor u qaaddo kharashka ololaha.
Ku dar Slack Add to Kooxaha Ku dar Google Chat
Automatic Smart Warbixinnada bil kasta
Warbixinno qoto dheer oo monthly reports si qurux badan u muujiya cabbiraadaha iyo koritaanka ololayaasha macaamiishaada.
Dhammaan macluumaadka hal guji ku yaal Google Sheets
Ha ku lumin ilbiriqsi markaad gacanta ku uruurinayso miisaanka macaamiishaada. Si fudud oo dhaqso ah ugu add them to a Google Sheet.
Download Sheet Google add-on
Hagaajiyo waxqabadka ololaha macaamiisha aad '
Ku soo ururi dhammaan xogta Google Sheets , shakhsiyeeyo digniinta waxqabadka sida loogu baahan yahay, oo hel bil kasta Warbixinno Smart ah oo loo diri karo macaamiishaada.
Download Sheet Google add-on Ku dar Slack Add to Kooxaha Ku dar Google Chat
Google AdWords kusaabsan Google AdWords Qalabka Hay'adaha
Baro wax badan oo ku saabsan qalabkeena loogu talagalay Google AdWords ee hay'adaha iyo wax kasta oo aan ku siin karno adiga iyo ganacsigaaga.
Waxa aynu u bixiyaan adiga iyo hay'adda advertising aad u
Features, faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka
Qalabka waxaa loogu talagalay si loo horumariyo Google AdWords istaraatijiyad hay'adaha iyo ayaa loogu talagalay in ay ku Clever Ads kooxda si fudud aad nolosha iyo in lagugu siiyo warbixin buuxda gacanta, mar walba oo ka meel kasta oo aad rabto, ee ololaha iyo kuwa macaamiisha aad .
Ma rabtaa in ololahaaga oo dhan la wanaajiyo, ilaa taariikhda, iyo si toos ah Google chat ? Waxaas oo dhan iyo in ka badanba waa waxa aan ku soo bandhigi karno, dhammaantoodna loogu talagalay inay kuu sheegaan waxaad u baahan tahay si aad u horumariso ololayaasha macaamiishaada si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican.
Waxaan dammaanad ka qaadeynaa inaan haysanno AdWords ugu wanaagsan ee hay'adaha isku-dhafan, wax badan ka ogow!
Badbaadiyaa waqti, lacag iyo khayraadka!
Qalabkeena loogu talagalay Google Ads waxaa loogu talagalay ujeedada ah in lagaa badbaadiyo lacag, ilo, iyo tan ugu muhiimsan .... Waqti!
Isku- Slack , Microsoft Teams , Google Chat bot , Google Spre ads heets Add-on, iyo Google Ads abuurista, hagaajinta iyo soo dejinta, waxaad awoodi doontaa inaad waqtigaaga qiimaha leh ku bixiso waxa run ahaantii muhiimka ah: macaamiishaada, iyo weli wakhti ayaa u hadhay si aad ugu raaxaysato subaxaas qaxwada aad jeceshahay!
Ogaado fursadaha ganacsi ee ugu wanaagsan, ka dhigi olole ugu wanaagsan, aad u hesho farriimaha kaliya ee ugu muhiimsan in ay ka fogaadaan wax jeediya aan loo baahnayn, aad u hesho warar bil kasta, iwm Marka la soo koobo, qalab u janjeedha inay AdWords for Hay'adaha in aad badbaadin doonaa waqti ay ku shancosbitaal ku saabsan waxa run ahaantii muhiim.
Maxaad samayn kartaa qalab our
warar faahfaahsan bil format PDF in si fiican loo tuso tubta iyo koritaanka of ololaha macaamiisha aad '. Focus on xogta in arrimaha si aad u, oo waxaan qiyaasi oo kaliya waxa muhiim ah si aad u badbaadin kartaa waqti on falanqaynta aan laga badinin faahfaahin ku saabsan waxa muhiim ugu dhigi wargeliyay, go'aamada data-driven.
Masraxa Beddelka, Erayada muhiimka ah ... Wax kasta oo aad rabto inaad ku ogaato warbixinnada la habeeyay. Dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay, iyo sida loo isticmaalo. Ku hagaaji ololahaaga iyo ololayaasha macaamiishaada oo ku saleysan waxqabadka, iyada oo loo marayo talooyin diyaar u ah in la isticmaalo iyo talooyin loogu talagalay gaar ahaan Google Adwords ee hay'adaha.
The sifooyinka wanaagsan ee apps kooxda ku salaysan
Hesho ogeysiis iyo warbixinno waqtiga-dhabta ah ku saabsan waxqabadka ololaha macaamiishaada. Markii aan ka hadlayno AdWords ee hay'adaha, waa inaan tixgelinno aaladda aan adeegsanno oo aan dooneyno inaan ka faa'iideysano helitaanka ogeysiisyada iyo warbixinnada ololaheena. Maxaad u isticmaashaa wakaaladaada? Qalabkeenna waxaad ku awoodi doontaa inaad la Google Ads mid ka mid ah saddexda qalab ee ugu caansan kooxda lagu sheekeysto adduunka oo dhan: Slack , Microsoft Teams ama Google Chat . Xullo oo ku hagaaji waxqabadka ololayaasha macaamiishaada xog!
Iska wargelin ku saabsan oo keliya wax muhiim ugu
Samee oo habeyso ogeysiisyadaada si aad u ogaato wax kasta oo ku dhaca ololayaashaada iyo kuwa macaamiishaada. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ogaato goorta beddelaaddu hoos u dhacayso ama goorta loo baahan yahay in kharashka ololuhu kordho, dejiso mid ka mid ah ogeysiisyadayada waxaanan kugu wargelin doonnaa dalabka isgaarsiinta ee aad dooratay! ( Slack , Microsoft Teams ama Google Chat ).
Habkan, waxaad noqon doontaa mid ka mid ah ay u tilmaamaan oo xuduudaheedu aad rabto in aad mudnaanta, kaas oo macluumaad aad rabto in aad hesho, oo taas dhacdooyinka waxaa loo tixgelin doonaa sida la yaab leh oo u baahan in la tilmaamay in aad si ay u ogaadaan kuwa daqiiqado / data muhiim .
Markaa in waxna aan la dareemin oo ololayaasha macaamiishaadu had iyo jeer waa kor! Google Ads ee hay'adaha waligood ma fududaan.
Ha ku lumin ilbiriqsi kale gacanta ku uruurinta mitirrada iyo xogta ololaha macaamiishaada. Dhammaantood si fudud oo dhaqso ah ugu dar xaashida Google. Google Ads ee hay'adaha si hufan, iyadoo la adeegsanayo qalabka ay bixiso Google iyo barnaamijyo kale oo caan ah oo aad horay ugu isticmaashay hay'addaada.
Google Sheets waa mid ka mid ah aaladaha loogu isticmaalo adduunka oo dhan dhammaan meheradaha lagu abaabulo dukumiintiyada iyo kooxaha? Haddii aad isticmaaleyso, waad hagaajin kartaa howlahaaga oo xogtaada oo dhan ayaa lagu hagaajin karaa Drive-kaaga. Ma fududaan karin!
Maxaa ka dhigay farqiga u?
Maxaad ugu adeegsaneysaa Google AdWords wakaaladaha?
Clever Ads waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid nahay barnaamijka Premier Google Partners, kaas oo aan ku damaanad qaadayno in geeddi-socodka uu yahay 100% mid aamin ah waxaanan ballan-qaadaynaa inaan ixtiraamno xogtaada gaarka ah iyo sidoo kale macaamiishaada. In kabadan 150,000 oo shirkado iyo shirkado ah ayaa nalashaqeystay oo nagu aaminay inay kor Google Ads , natiijooyin aad uwanaagsan. Kama qoomameyn doontid, habka ugu fiican uguna jaban (bilaash) ah ee lagu hagaajiyo Google Ads ee hay'adaha.
Qalabkeena iyo khibradeena waxaan ku guuleysanay inaan u bedelno wax qalafsan oo waqti badan ku qaadanaya wax fudud oo dhaqso leh. Xitaa waxaad AdWords kartaa AdWords wakaaladuhu inay nala baashaalaan! Waxaad awoodi doontaa inaad "ku ciyaarto" warbixinnadeena iyo talooyinkeena si aad uhesho ugu badnaan ROI (Ku Laabashada Maalgashiga) iyo dhibcaha ugu badan adigoon xitaa ogaan, dhammaan intaad baraneyso!
U wareeji wakaaladdaada tixraaca wakaaladaha Google Ads , kuwa ugu caqliga badan uguna khibradda badan hawshan oo ay weheliso Clever Ads Had iyo jeer waan ognahay waxa xiga ee la sameeyo, waad nagu kalsoonaan kartaa inaan qaadno tallaabooyinka ugu horreeya ama kuwa xiga.
Waxaan aaminsanahay in hay'ad kasta oo cabir iyo miisaaniyad kasta leh ay tahay inay marin u hesho xayeysiinta Google, sidaa darteed waxaan soo saarnay qalab ka mid ah Google Ads ee hay'adaha kuu oggolaanaya inaad kula tartanto goob heer sare ah hay'ado waaweyn oo khibrad leh oo leh suuqgeyn ballaaran. miisaaniyadaha.
Sababaha aad u rabto inaad u adeegsato qalabkeenna way kala duwanaan karaan, haddii aad ka shakisan tahay in Google Ads ' ee macaamiishaadu ay wax ka sii fiicnaanayaan, haddii aad rabto inaad hubiso haddii hay'addaada suuqgeynta ay runti wax badan qabanayso, ama waxaa laga yaabaa inaad tahay uun xiiso u leh in la ogaado haddii shaqadooda adag ay miro dhal tahay? Clever Ads AdWords hay'adaha waa Suite qalabka.
Intaas waxaa sii dheer, kooxdayada khabiirada ah waxay had iyo jeer diyaar u yihiin inay ku caawiyaan, waxaadna markasta kala xiriiri kartaa wixii su'aalo ah, walaac ah, talo bixin ama caawimaad ah ee aad uga baahan tahay kaaliyaha @ cleverads .com, waxaan ku farxi doonnaa inaan adiga iyo hay'addaada kaa caawinno wax kasta oo adiga iyo hay'addaadu u baahan yihiin.
Faa'iido kale ama faa'iido u leh adeegsiga qalabkeenna ' AdWords Clever Ads ah ayaa ah inaad wax walba ka heli karto Clever Ads , waxaadna isku dari kartaa awoodda Google Ads iyo dhammaan fudeydka maareynta ee ay Clever Ads . Dhammaan warbixinnadeenna, digniinta, talooyinka ayaa kaa caawin doona inaad u abuurto Google Ads macaamiishaada, inaad marwalba la jaanqaado algorithms-ka cusub ee Google, kordhinta ololaha, iwm. si loo waafajiyo fikradaha muhiimka ah, iyo waxyaabo kale. Nidaamkeenna guud ee hal-abuurka ah ee Google Ads for Agencies agabyadoodu waxay diyaar u yihiin inay qabtaan dhammaan shaqooyinka adag intaad waqtigaaga ku bixinayso waxa ugu wanaagsan ee aad qabato: socodsiinta iyo maaraynta ganacsigaaga iyo ka farxinta macaamiishaada.
apps Team-ku-saleysan ee isgaarsiinta
Isku Google Ads si ay u noqdaan Slack , Microsoft Teams , ama Google Chat
U diyaari digniintaada caadada ah si aad u hesho hal mar ama warbixinno toddobaadle ah si aad uga hesho qiyaaso adoo adeegsanaya wada sheekaysiga oo aad ku hesho garaafyo iyo jaangooyooyin la xiriira waxqabadka koontada macmiilkaaga. Google AdWords ee wakaaladuhu way ku fududaan isdhexgalka wada sheekaysiga sidan oo kale!
Google Ads si otomaatig ah ha loogu abuuro bilaash.
Ka qaado dhibicdii ugu dambaysay ee ololahaaga ads Clever Google Ads Audit oo kor u qaad waxqabadkaaga ololayaasha Google Ads in yar.
Tarjumaha Google Ads
Ha xuduud si ganacsigaaga. Ku xayeysiiso meel kasta oo aad rabto! Translate wax walba oo luqado kala duwan.
Shaandhayso natiijooyinka iyo aad ogaatid jiritaanka fursadaha fiican ee ololaha aad.
Alaabooyin badan oo Clever Ads
qalabka All aad u baahan tahay si loo kordhiyo olole suuq digital macaamiisha aad '.